Kenya oo mamnuucday Isu imaatinada Siyaasadeed | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Kenya oo mamnuucday Isu imaatinada Siyaasadeed
Kenya oo mamnuucday Isu imaatinada Siyaasadeed
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa mamnuucay dhamaan noocyada shirarka siyaasadeed ee dalka mudo dhan 30 maalmood oo laga bilaabo saqda dhexe ee jimcaha taasi oo qeyb ka ah talaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus.
In kasta oo uu qirayo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dhowaanahan ka jiray dalka in ay si weyn u saameeyeen kiisaska sii kordhaya ee infekshannada, Madaxa Qaranka ayaa sheegay in uusan ka laaban doonin in la mamnuuco kulammada noocaas ah.
“Waxyaabahaan ku saabsan shirarka siyaasadeed laga bilaabo maanta waxaan dhahnay in la joojiyay muddo 30 maalmood ah. Taasina aniga waxay khusaysaa aniga Madaxweyne ahaan MCA-da xagga hoose. Waxaan u soo saarnay amar ah in qof kasta oo ku dhiiran kara inuu amarkan jebiyo, lala tiigsan doono iyadoo la waafajinayo sharciyada dalkeenna Kenya, iyadoo aan la tixgelinaynin xaaladdiisa bulsho, dhaqaale ama siyaasadeed, ”ayuu Madaxweynaha Kenya.
Gudoomiyaasha gobalada ayaa khamiistii weydiistey madaxweyne Kenyatta inuu adeegsado khudbadiisa jimcaha si loo mamnuuco dhacdooyinka siyaasadeed muddo bil ah Waxay yiraahdeen kulamada noocan oo kale ah iyo shirarku waxay noqdeen kuwa aad u faafiya COVID-19.
Kenya oo mamnuucday Isu imaatinada Siyaasadeed was last modified: March 13th, 2021 by Admin
Beesha Caalamka oo baaqyo cusub kasoo saartay xaaladda siyaasadda Soomaaliya
Dhageyso:-Kulan wadatashi ah oo kor loogu qaadayo wax soo saarka xoolaha oo Baydhabo lagu daahfuray
Dagaal culus oo ka dhacay Waajid iyo Al-Shabaab oo mudo kooban la wareegay magaalada
Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya oo soo dhoweeyay hannaanka doorashada ee lagu heshiiyay